युरोपियन युनियनलाई बाबुरामको सुझाव, ‘गुड र गोबर नचिन्नेले थुतुनो नचलाएकै बेस - Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
युरोपियन युनियनलाई बाबुरामको सुझाव, ‘गुड र गोबर नचिन्नेले थुतुनो नचलाएकै बेस
Published On : ११ चैत्र २०७४, आईतवार ०४:५६
पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले नेपालको मामिलामा नबोल्न युरोपियन युनियनलाई सुझाव दिएका छन्। सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत भट्टराईले नेपाली जनताले बनाएको संविधानको विषयमा युनियनले दिएको सुझाव अापत्तिजनक भएको बताएका हुन्।यो खबर थाहा खबरमा छ ।
संविधानमा कतै ‘अारक्षण’ शब्द नभएको उनले स्पष्ट पारेका छन्। संविधानमा ‘समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व’ मात्र भएको त्यो एकदमै सही भएको उनले ट्वीटरमा उल्लेख गरेका छन्। युरोपियन युनियनले आरक्षणबाट खस आर्यलाई हटाउन सुझाव दिएको भोलिपल्ट पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्। यस्तो छ उनको ट्वीट–